Ubhaka Deluxe-SFH
Amafulegi wethu we-backpack yakudala kanye ne-patent (ifulegi elihambayo or i-mochila banner) , okutholayo inhlanganisela eguquguqukayo yezinketho zefulegi ezinhlanu ohlelweni olulodwa, Ubhaka ofanayo kanye ne-flagpole efanayo ingafanelana nezimo ezi-5 ezidumile (uphaphe, i-teardrop kanye nonxande, i-arch, i-paddle) emakethe.
Yehlisa i-inventory yakho nendawo yesitoko, kodwa izinketho ezengeziwe zabasebenzisi bokugcina.
Isibhengezo se-backpack i-SFH isebenzisa i-backpack ye-deluxe efanayo, iphaneli engemuva ye-3D-foam enesisindo esincane esine-cushion kanye nomklamo wesiteshi sokugeleza komoya, Ama-Stps alungisekayo, ahlinzeka ngokunethezeka usebenzisa isipiliyoni;ube nephakethe eliseceleni kanye nekhompathimenti enoziphu ikusiza isiphuzo noma amaflaya okuthengisa esitolo, okushiya ogqokile izandla zamahhala.
Ifulegi kulula ukulimisa, Xhuma izingcezu ezine ze-flagpole ndawonye kusukela ku-thinnest kuya kokukhulu kakhulu, khona-ke uzothola isigxobo sefulegi esifanelana nefulegi lezinsiba (S) / ifulegi le-teardrop(F)/ Ifulegi le-Arch(C)/Ifulegi le-Paddle( U).Thatha ucezu oluncane kakhulu bese ufaka imbobo engaphezulu kwesigaba esilandelayo, usonta isivalo sesikulufu futhi size sikhiyeke ngokuvikelekile, lokho okwefulegi elingunxande.
(2) Inhlanganisela evumelana nezimo yezinketho zamafulege ezinhlanu ohlelweni olulodwa, kulula ukushintsha futhi ulawule isitoko sakho ukuze uhlangabezane nokuhleleka okuphuthumayo kwamakhasimende, unciphise inani lakho lokusungula kanye nesitoko sesitoko.
(3) Iphaneli elingemuva le-3D-foam elibunjwe ngesisindo esilula elinomcamelo futhi livumela idizayini yesiteshi sokugeleza komoya, inikeza ukunethezeka kokusebenzisa isipiliyoni
(4) Igumbi elinoziphu namanye amaphakethe anikeza isikhala esengeziwe sokukhulula izandla zakho.
(5) Amabhakede ebhande avimbela ubhaka ekuncikeni emoyeni onamandla.
(6) Amahhuku aklama emabhandeni amabhodlela amanzi
(7) Izinto ze-Oxford zenza ubhaka uqine futhi uhlale isikhathi eside ukuze usetshenziswe isikhathi eside.
Ikhodi yento umumo Usayizi wesibhengezo I-GW (i-hardware kuphela)
Ubhaka F Izinyembezi 103x52cm 1.2KG
Ubhaka S Uphaphe 122x51cm
Ubhaka H Unxande 110x40cm
Ubhaka C I-Arch 152x51cm
Ubhaka U Ukugwedla 105x50cm
Okwedlule: I-Backpack Deluxe - O
Olandelayo: I-Backpack Deluxe - Okubili - Ubuso